Safal Khabar - विश्वकै भ्रष्ट प्रहरीको सूचिमा छन् यी देश
विश्वकै भ्रष्ट प्रहरीको सूचिमा छन् यी देश
शुक्रबार, २७ असार २०७६, १५ : ३६
एजेन्सी । घुस्याह प्रहरीबारे धेरैलाई थाहा छ । प्रहरीको वर्दी लगाएका केही राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय मर्यादा बिर्सिदा भ्रष्टाचारका घटनाहरु दिनानुदिन बढीरहेका छन् । उनीहरुले आम मानिससँग अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने र आम मानिसलाई दुःख दिने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि प्रहरी प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचारबारे बेलाबेला चर्चा हुने गर्छ । मासिक आउने सेवा सुविधाबाट सन्तुष्ट नभएका प्रहरीहरु यस्तो कार्यमा बढी संलग्न देखिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । उत्कृष्ट छवी बनाएको प्रहरी प्रशासनलाई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर अपराध बेलाबेलामा टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको छ । वण्डरलिष्टले विश्वकै घुस्याहा प्रहरी हुने देशको सुची बनाएको छ । यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा धेरै घुस्याहा प्रहरी हुने देशहरुः
पाकिस्तानः पाकिस्तान आम सर्वसाधरणलाई लाग्छ कि सबैभन्दा भ्रष्ट सेक्टर प्रहरी प्रशासन हो । प्रहरीहरु क्रुरता देखाउँदै पैसा असुल्ने काम गर्छन् । निर्दोष व्यक्ति, अपराधी तथा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग उनीहरु पैसा असुल्ने काम गर्छन् । एजेके पुलिस सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट र क्रुर रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । पञ्जाव पुलिस सबैभन्दा खराब पुलिसको दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
रसिया पुलिसः विश्वकै समृद्ध देश भएता पनि यस देशका पुलिसहरु भ्रष्ट रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिने, पैसा असुल्ने जस्ता कार्यमा रसिया प्रहरी अगाडि रहेको बताइएको छ ।
सुडान पुलिसः विभिन्न कारणले सुडान पुलिस अति भ्रष्ट रहेको देखाउछ । यस देशमा ठुलो संख्यामा हत्याकाण्ड हुने गरेका छन् । अर्को समस्या यो देशले आफ्नै पुलिस भ्रष्ट भएर चुकाइरहेको छ । आम नागरिकको तलबबाट प्रहरीहरु कमिशन माग्ने, उनीहरुलाई थर्काउने तथा लुट्न समेत पछि नपर्ने खालका रहेका छन् । यहाँका प्रहरी फाइल रिपोर्ट गर्न, अपराध अनुसन्धान पनि निकै कम स्तरमा गर्छन् । उनीहरुलाई पैसा आउँछ भने मात्र तमतयारी देखाउँछन् ।
अफगानिस्तान पुलिसः विभिन्न चेक पोइन्टमा बसेर अफगान्सितानका पुलिस पैसा असुल्ने गरेको अनसन्धानले देखाएको थियो । अपराधीलाई पक्रनुको सट्टा उनीहरुसँग पैसा लिएर छोड्ने गरेको समाचार व्यापक आउने गरेको थियो ।
यी पनि हुन् भ्रष्ट प्रहरीको सूचिमा रहेका देशहरुः
१. भारतीय पूर्वराजदुत श्यामशरण एकाएक किन आए काठमाडौं ?
२. कुन–कुन मन्त्री पर्दैछन डेन्जर जोनमा ?
३. नाईट क्लबमा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे डान्स
४. शिक्षकलाई तलब खुवाउन घरघरबाट सहयोग
५. प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिको योजनामा ब्रह्मलुट
६. विद्युतीय राहदानी बनाउने योजना अलपत्र
७. पक्राउका क्रममा आलमले मान्छे मार्ने धम्की दिएको खुलासा
८. सेना फिर्ता लैजान प्रधानमन्त्रीको आग्रह, भारतसँग वार्ताको तयारी
९. आमलले प्रहरीलाई किन धम्क्याए ?
३. बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नाममा कोकाकोलाको दादागिरी
५. भारतले नेपालको सीमा मिचेपछि चीनले मौनता तोड्यो
६. ओली र नेपालवीच बालुवाटारमा ‘गोप्य’ भेटवार्ता
७. कोकाकोला पिउनेलाई मस्ती, कारखाना वरपर बस्नेलाई सास्ती